PressReader - Isolezwe: 2017-11-15 - Ukwangana kukhombisa uthando
Ukwangana kukhombisa uthando
Isolezwe - 2017-11-15 - IZINDABA - ZANELE MTHETHWA
KUJWAYELEKILE ukubona abantu benkonkoshelana, bebingelelana ngokwangana okudume ngokuthi i-hug.
Ukuxhawula akusemandla njengoba ngisho abobulili obungafani sebebingelelana ngakho ukwangana. Ngisho emasontweni ungenisile lo mkhuba, okuze kukhuthazwe ukuthi amakholwa awangane ukukhombisana uthando. Muva nje umfundi waleli phephandaba ubhale incwadi eya kuMhleli ezwakalisa ukungayithakaseli indaba yokwangana.
UMnuz Mbongiseni Dlamini waseNewlands West, uthe akubukeki ukwangana ikakhulukazi njengoba sekwenziwa nangabobulili obungafani.
UMnuz Madoda Zungu oyisazi samasiko uthi akuyona inkinga ukwangana uma kungaphambani nenkolo nesiko. Uthe kuyindlela yokukhombisa ukuphilelana njengokuxhawula. “Ngeke usixhawule isitha sakho ngoba ukuxhawula kukhombisa ukuphilelana. Kanjalo nokwangana kusho izinga lokuphilelana nomuntu.”Uthe ukwangana kuqala ukuba yinkinga uma sekusetshenziselwa izinhloso ezithize. Ulinganise ngowesilia onkonkoshela unkosikazi womunye ngokumanga. Ugcizelela nokuthi nakho ukuxhawula kuyakhetha ngoba inkosi neSilo asixhawulwa kodwa yibona akumele baxhawule.
Ongoti bezokweluleka ngokomqondo bathi ukwangana kunomthelela ekwehliseni ingcindezi nokhwantalala. Ucwaningo olwenziwe yiBonitas Medical Fund muva nje luveze ukuthi ukwangana kukhombisa uthando futhi kuletha imfudumalo kumuntu.
Isikhungo sabadala iTafta eThekwini nonyaka sethule umkhankaso obizwa ngeHug Therapy. Kukhuthazwa abantu ukuthi bavakashele isikhungo sabadala balethele abadala izipho, babange. Lokhu bakwenza ngoba bakholelwa ukuthi ukwangana kuyelapha emphefumulweni.
Ngokwe-website iMoveOneInc kuvela ukuthi indlela yokubingelela ihlukana ngokwezindawo. E-United States of America naseBritain kwande ukuxhawulana. EFrance abangani bayaxhawulana bese beqabulana ezihlathini. AbaseJapan bagobisa amakhanda uma bebingelelana kanti emazweni ase-Arab abesilisa bayangana, baqabulane nasezihlathini.
UKWANGANA kuthiwa kukhombisa ukuphilelana kodwa nakhona kuya ngezinkolelo nesiko njengoba kwamanye amazwe kungavunyelwe